सङ्खुवासभा हत्याकाण्ड आफन्तैबाट ! - Bulbul Samachar
सङ्खुवासभा हत्याकाण्ड आफन्तैबाट !
bulbul शनिवार, भदौ २६ गते 141 views
ठूला अपराधका घटनाको अनुसन्धानमा सक्रिय सिआईबीलाई यो घटनामा पनि सफलता प्राप्त भएको हो । यसअघि बैतडीमा भएको भागरथी हत्या प्रकरण र बझाङमा भएको सम्झना विकको हत्या अनुसन्धानमा पनि सिआईबीले नै अनुसन्धान गरेको थियो । अभियुक्तलाई आइतबार चैनपुरमा सार्वजनिक गर्ने प्रहरीले तयारी गरिरहेको स्रोतले बतायो ।
आज ऋषिपञ्चमी : घरघरमा सप्तऋषिको पूजा गरिँदै !